Orinasa makiazy maso, mpamatsy - mpanamboatra makiazy maso any Sina
Label manokana Makeup Eyeshadow 35 loko tsy tantera-drano Matte tany tononkalo Pearlescent miloko mavomavo eyeshadow Palette
Item TSY J0877 Brand Jinfuya na manaova endrika vovoka marika anao manokana, loko 35 samy hafa, manana loko matte, loko manjelanjelatra, sns, tsara sy milamina izy io, mora makiazy Mety tsara amin'ny alokaloka 35 mety hitovy amin'ny volon-koditra rehetra. Tsara izany ary mahazo aina, mora makiazy. Ny matte mangatsiatsiaka sy ny palette eyeshadow mamiratra tonga lafatra amin'ny fampiasana isan'andro na alina. Votoatiny 305g / pallet Fitaovana hatsaran-tarehy ho an'ny mason'i Lady. Mampanantena vegan izahay ary 100% MAIMAIM-POANA momba ny OEM ...
Inona izany ? Ny eyeshadow ranon-javatra dia alokaloka misy tsiranoka miantraika be sy avo lenta izay manome anao loko feno fahasahiana mihoapampana sy vokany maro refy. Voajanahary kokoa noho ny vovoka aloky ny maso, mifandray amin'ny hoditra, ny vokatry ny makiazy tsy misy kilema. Makà masony mibontsina amin'ny alàlan'ny glitter glitter iray ihany miaraka amin'ity eyeshadow ranon-javatra manjavozavo ity, namboarina ho an'ny akanjo milamina, latsaka kely ary misy fiatraikany lehibe; ary ampiasao ny rantsan-tànana na ny borosy eyeshadow fisaka ary apetaho amin'ny azy manokana mba hijerena endrika malefaka sy malefaka na laye ...
Shimmer Liquid Eyeshadow Vegan Makeup Eymet kosmetika 18 loko Private Lababel Shinning Liquid Glitter Eye shade
Inona izany ? Ny lokon'ny aloky ny maso sy ny famirapiratany feno, matevina lalina, mora trandrahana manarona, loko fanamiana, amphibious lena lena. Ny firafitra tsara dia manana loko isan-karazany hisafidianana. Ny aloky ny maso manjelanjelatra dia tonga lafatra amin'ny fitafiana irery na mifangaro amin'ny alokaloka hafa, izay manasongadina tsara ny volon'ny maso ary hahatonga anao ho mpitazana maso amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'ny tendrony tsapa tena voafaritra, mikoriana tsy tapaka izy ary milamina, maina vetivety, mamorona eyeliner marefo sy manintona ary maso sh ...